Aabaha Tagsiile Austaralia Dhawaan Lagu Dilay oo Tacsi u Dhigay Wiilkiisa |
Aabaha Tagsiile Austaralia Dhawaan Lagu Dilay oo Tacsi u Dhigay Wiilkiisa
Australia (NN) 30/05/2016
Aabaha tagsiile Soomaali ahaa oo dhawaan lagu dilay dalkaasi Australia ayaa waxaa uu dhawaan tacsi u dhigay wiilkiisa oo gacan ka xaq daran ay dishay.
Tagsiilahaa marxuumka ah ee la dilay ayaa wuxuu ka tagsiileyn jiray xaafada Fitzroy oo kutaala magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia. Ninkaas tagsiilaha ahaa ayaa la oran jiray Maxamuud Mukhtaar. Aabaha ninkaasi marxuumka ah ayaa sheegay in loo baahan yahay in wiilkiisa lagu xasuusto inuu ahaa nin bulshay ah.
Dhacdada lagu dilay ninkaas ayaa aad uga nixisay bulshada ama qawmiyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne. Mukhtaar Xuseen oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa aad u jeclaa wiilkiisa la dilay wiilkaas oo ahaa wiilka wiilal uu dhalay ugu da’ weynaa. Marxuumka iyo aabihii ayaa wada daganaa hal meel shantii sano ee lasoo dhaafay, hal tagsi ayayna ku wada shaqeysan jireen, midba galin.
‘Xiriir qoys oo qura nagama uusan dhexeyne waxaanu asxaab u ahayn si gaar ah’. Sidaa ayuu yiri aabaha marxuumku. “Sida daacada ah, waxaanu ahayn saaxiibo had iyo jeer wada hadla oo xogta is dhaafsada.” Intaa ayuu kudaray hadalka. 20kii bishii hore ee Abriil ayaa si naxariis darro ah loogu dilay marxuumkaas meel u jirta wax ka yar 200m gurigooda.